Akwụkwọ Jafar Sadhik na Martech Zone |
Edemede site na Jafar Sadhik kwuru
Jafar Sadhik kwuru
A omiiko dijitalụ marketer nwere ezigbo ihe ọmụma na ubi dị ka ngwá ọrụ SaaS, CX, ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ, wdg. na nnukwu mmasị na ọrụ Agatha Christie.
Wednesday, November 11, 2020 Tọzdee, Eprel 1, 2021 Jafar Sadhik kwuru
Anyị anụla banyere Salesforce, Hubspot, ma ọ bụ MailChimp. Ha n'ezie ewetawo oge nke ịba ụba SaaS. SaaS ma ọ bụ Software-dị ka ọrụ, dị mfe, bụ mgbe ndị ọrụ na-enweta ngwanrọ na ndenye aha. N'inwe ọtụtụ uru dị ka nchekwa, obere nchekwa, mgbanwe, nnweta n'etiti ndị ọzọ, ụdị SaaS egosila na ọ ga-amị mkpụrụ maka azụmaahịa na-eto eto, melite afọ ojuju ndị ahịa na ahụmịhe ndị ahịa. Mmefu ngwanrọ ga-eto na 10.5% na 2020, ọtụtụ n'ime ha ga-abụ SaaS chụpụrụ.